विद्युतीय सवारीमा विश्वसनियता बढाउँदै ‘महिन्द्रा... :: कमल नेपाल :: Setopati
शनिबार, मंसिर २९, २०७५
विद्युतीय सवारीमा विश्वसनियता बढाउँदै ‘महिन्द्रा इटुओ’
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, पुस १६
विश्वका धेरै देशले विद्युतीय सवारीलाई नयाँ विकल्पको रुपमा लिन थालिरहेका बेला नेपालमा पनि धेरैले चासो देखाएका छन्। लोडसेडिङ समेत हट्दै गर्दा अहिले केही विद्युतीय सवारी कम्पनीहरु चार्जिङ स्टेशन बनाउने क्रममा छन्।
धेरै पहिलेदेखि नै विद्युतीय सवारीहरु भित्रिए पनि हिजोआज राजधानीका सडकमा उपस्थिति बढ्दो क्रममा देखिन्छ। नेपालमा इटुओ २०१२ मै भित्रिएको हो। त्योभन्दा पहिले रेभा र अन्य केही चाइनिज विद्युतीय गाडी नेपाली सडकमा प्रवेश भइसकेका थिए। रेभाबाहेक अरुले त्यति लोकप्रियता हासिल गर्न सकेनन्।
रेभा अग्निमा मिल्नुभन्दा पहिले नै इकोभिजनबाट १ सय ९८ ओटा गाडी बिक्रि भैसकेको अग्नि इनर्जी प्रालिका एक्जुकेटिभ सिनियर म्यानेजर प्रमोद भण्डारीले जानकारी दिए।
अग्निले इटुओ नेपाली बजारमा ल्याएपछि करिव २ सयवटा बेच्न सफल भएको भण्डारीले बताए। इटुओको अर्को संस्करण ‘इटुओ स्पोर्टस्’ २० ओटा मात्र ल्याएको अग्निले पुनः दसैँ अगाडि नै इटुओ प्लस ‘पिएट’ नेपाली बजारमा ल्यायो।
सुरुवाती समयमा विद्युतीय सवारीको बारेमा ग्राहकलाई बुझाउन निकै गाह्रो भएको भण्डारीको अनुभव छ। सुरुमा भित्रिएको इटुमा पावर स्टेरिङ नभएको २ वटा ढोका र एक पटकको फुल चार्जमा १ सय किलोमिटर मात्र चलाउन सकिन्थ्यो।
ग्राहकको प्रतिकृयाअनुसार सुधार गर्दै अहिले इटुओ प्लस ‘पिएट’ सम्म आइपुग्दा ४ ओटा ढोका भएको र १४० किलोमिटरसम्म चलाउन सकिने भैसकेको छ। ‘पिएट’ करिव १२ युनिट बिक्री भएको भण्डारीले जानकारी दिए। नेपाली बजारमा विद्युतीय गाडीमा महिन्द्राले मात्र ९५ प्रतिशत भन्दा धेरै बजार हिस्सा ओगटेको उनले दावी गरे।
‘हाम्रो कस्टमर केयर, कम्पनीप्रतिको विश्वास, बिक्री पछिको सेवा, गाडीको गुणस्तरका कारण इटुओ यति धेरै लोकप्रिय हुन सकेको हो’ भण्डारीले सेतोपाटीसँग भने।
महिन्द्राले इटुओको खरिदमा उच्चस्तरीय ‘इजी होम चार्जर’ दिने बताउँदै उनले सहर केन्द्रित गाडी भएकाले आफूहरुले फास्ट चार्जिङ स्टेसन नबनाएको बताए।
‘फास्ट चार्जिङ स्टेसन लामो दुरीको यात्राको लागि हो तर अहिले नेपालको स्थिति हेर्दा कुनै पनि विद्युतीय गाडी लामो दुरीमा प्रयोग गर्नु उचित छैन’ उनले भने ‘बीच सडकमा गाडी बिग्रियो भने बनाउन जान्ने दक्ष मेकानिकको पनि अभाव छ।’
यदी आवश्यकता परेको खण्डमा र ग्राहकको माग आएमा यस्ता स्टेसन राख्न अग्नि तयार रहेको उनले बताए। कम्पनीले इटुओको मूल्य ३१ लाख तोकेको छ।
यस्ता छन् महिन्द्रा ईटुओ प्लस ‘पिएट’का विशेषता
३० किलोवाट क्षमताको मोटर भएको यो गाडीले ९१ एनएम टर्क उत्सर्जन गर्छ। यो कारमा २१० एम्पेयरको लिथियम आयोन ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ, जुन ९ घण्टामा फुल चार्ज हुन्छ।
त्यस्तै ईटुओ प्लस ‘पिएट’ फुल चार्ज गर्दा १४० किलोमिटर सम्म चल्ने कम्पनीको दावी छ। यसको अधिक रफ्तार ८५ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको अग्निले जनाएको छ।
यसमा भएको १३५ लिटरको बुट स्पेसले ग्राहकलाई थप सहजता प्रदान गरेको छ। १७० एमएम ग्राउण्ड क्लियरेन्सले यसलाई नेपालको बाटो सुहाउँदो बनाएको कम्पनीले जनाएको छ।
यसमा फ्रन्ट ब्रेक डिस्क, रेयर ब्रेक ड्रम र पार्किङ ब्रेक म्यानुअल छ। यसको कुल लम्बाइ ३५९० मिमि, चौडाइ १५७५ मिमि र उचाइ १५८५ मिमि रहेको छ।
निलो रातो, सिल्भर र सेतो रङमा उपलब्ध कार ४ सिट क्षमताको हो। यसको ‘लेग स्पेस’ ठूलो भएकोले यात्रु तथा चालकलाई आरामदायी यात्राको अनुभुति गराउने कम्पनीको दावी छ। यसमा फास्ट चार्जर अप्सन पनि छ।
यसमा भएको सिट बेल्ट रिमाइन्डर, चाइल्ड सिट, रेयर डोर चाइल्ड लक, रिजर्भ पार्किङ क्यामरा, हिल हेल्ड असिस्ट लगायतका फिचर्सले यात्रालाई अझ सहज बनाएको छ।
सिट बेल्ट रिमाइन्डर, ब्लु टुथ, स्पिकर, स्मार्ट फोन कनेक्टिभिटी, प्रोजेक्टर हेड ल्याम्प, कृष्टल लिड टेल ल्याम्प, पावर विन्डो, रिमोट लक, की लेस इन्ट्री, इलेक्ट्रोनिक एड्जस्टेवल मिरर, अलोए ह्विल, अण्डर हुड ल्याम्प लगायतका फिर्चस इटुओ प्लस ‘पिएट’ मा छन्।
यस्ता विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले नेपाल इन्धनमा परनिर्भर बन्नु नपर्ने तथा सारा देशकै आर्थिक भार कम हुने कम्पनीको विश्वास छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, पुस १६, २०७४, १२:०३:३४
ट्याक्सी चालकहरूको सामूहिक प्रण- हामी अब मिटरमै जान्छौं
एयर एसियाले दिएका १० चेक गायब, १२ बाउन्स
कार्पेट बिछ्याएर त्रिभुवन विमानस्थल चिटिक्क (तस्बिरहरू)
न्यूजिल्याण्डमा सत्यमोहनको बल डान्स
राप्ती नदीमा ५ जनाको सामुहिक अन्त्यष्टि, नव जोडी किरिया पुत्री
बिएमडब्ल्युका मोटरसाइकल अब नेपाली बजारमा
टिभीएस जुपिटर क्लासिक अब अटम ब्राउनमा
विभागमा पञ्जीकरण नभएका सवारी पुस १ देखि सडकमा गुड्न नपाउने
सुन्दर यातायातले विद्युतीय बस ल्याउँदै, मोबाइलबाटै भाडा तिर्न सकिने
टाटा नेक्सनले सुरक्षा रेटिङमा पायो ५ स्टार
आइएमई मोटर्सको पोखरामा नयाँ शाखा
हामी कम्युनिष्टले राजनीतिलाई कस्तो बनायौं? घनश्याम भुसाल
लोकसेवाः छवि मात्रले पुग्ला? दुर्गा कार्की
के पुँजीवादले बलात्कार बढाउँछ? जीवन क्षेत्री
सरकारलाई ट्याक्सी चालकको पत्र अनिल पाण्डे
आमाले सोध्लिन् नि, खै छोरा भन्लिन्.... दिवाकर बागचन्द
लैंगिक हिंसाविरूद्ध एकता पवित्रा शर्मा
छोरीहरु! डा असीम महत
निर्मला तिमी किन आइरहन्छौ? दीपा कुँवर
ईतिहासले तिमीलाई परिचय दिनेछ सिंहदरबार रमा दुलाल
बहिनी निर्मलालाई चिठी रेजिना कार्की
‘म चलखेलमा लागेको होइन’ सेतोपाटी संवाददाता
मैले देखेको काठमाडौंको दसैं सन्तोष मिश्र
015531040, 9801123339, 9851123339